पटक–पटक हात धुनुहुन्छ? होसियार हुनुहोस हुनसक्छ एक प्रकारको मानसिक समस्या - साँचो खबर
पटक–पटक हात धुनुहुन्छ? होसियार हुनुहोस हुनसक्छ एक प्रकारको मानसिक समस्या
वातावरण वा वरपर सफा राख्नु र घरलाई राम्ररी सङ्गठित गर्नु स्वस्थ बानीहरू हुन् । तर, जब यी स्वस्थ बानीले व्याकुल वा चिन्तित गराउन थाल्छ भने यो समस्याग्रस्त हुनसक्छ ।
धेरैपटक हात धुनु, घरलाई पटक–पटक सफा गर्नु र दराजमा कपडा अचम्म लाग्नेगरी मिलाएर राख्नु चिन्ताको सङ्केत हुन सक्छ, जसलाई चिकित्सा भाषामा ओबसेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर वा ओसिडी भनेर चिनिन्छ । यस समस्याबाट पीडित व्यक्तिसँग हुने विचार र बाध्यताले उनीहरूको जीवनलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउँछ ।
ओसिडीका सङ्केतहरू बिस्तारै देखा पर्छ तर सुरुवाती चरणमा पत्ता लागेमा यसलाई सजिलैसँग उपचार गर्न सकिन्छ । यस्ता छन् ओसिडीको प्रारम्भिक सङ्केत :
पटक–पटक हात धुने : हात सफा राख्नु स्वस्थ्यकर बानी हो । यसले भाइरस र ब्याक्टेरिया सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्छ । तर, पटक–पटक वा अत्यधिक सफाइ पनि ओसिडीको सङ्केत हुन सक्छ । किटाणु वा ब्याक्टेरियाको डरले आफूलाई सफा राख्नु पनि ओसिडीको सङ्केत हो ।
पटक–पटक केही कुराको जाँच गर्नु : अत्यधिक रूपमा ढोका, ग्यास वा अन्य सबै कुराको जाँच गरिरहनु केही सही छैन भनेर सङ्केत हुन सक्छ । हरेक दुईदेखि तीन घण्टापछि पटक–पटक जाँच गर्नु ओसिडीबाट पीडित मानिसबीचको साझा व्यवहार हो ।
एक निश्चित ढाचामा काम गर्नुपर्ने : ओसिडी भएका व्यक्तिहरूले केही सङ्ख्यात्मक बानीका अनुसार गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्छन् र तिनीहरू यसलाई प्रायजसो अनुशरण गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, सिँढी चढ्दा सिँढी गन्नुपर्ने बानी वा कुनै एक विशेष समयमा एकै प्रकारको निश्चित गतिविधि गर्नु पनि हुनसक्छ । यसो नगर्दा केही नराम्रो घटना घट्न सक्छ भन्ने उनीहरूको मनमा डर हुनेगर्छ ।
एकदम व्यवस्थित हुनुपर्ने : ओसिडीबाट पीडित केही मानिस एकदम व्यवस्थित हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो सबै सामान एक निश्चित ढाँचाले व्यवस्थित तरिकाले मिलाउने गर्छन् । आफ्नो वरपरका चिजमा कुनै परिवर्तन देखेमा उनीहरू चिन्तित हुन सक्छन् ।
सबै काममा पर्फेक्ट हुन खोज्ने : ओसिडीबाट पीडित धेरै व्यक्ति सबै काममा पर्फेक्ट हुन खोज्छन् । यस समस्याबाट ग्रस्त मानिस आफू कस्तो देखिरहेको छु वा शरीरको एक विशेष भागको बारेमा धेरै सजग हुन्छन् । केही व्यक्तिलाई आफ्नो नाक वा मुस्कान नराम्रो लाग्न सक्छ, जसले तिनीहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा सचेत बनाउने गर्छ ।
विशाल बंगलालाई एक ठाउँबाट अर्कै ठाउँमा सारियो,सार्न मात्रै ४ करोड ६० लाख खर्च
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतमा अपहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ दिन आज सर्वोच्च अदालत जादै